Nyowani Zvekuita Matambudziko eiyo 50th Anniversary yeRedwood National Parks | IPhone nhau
Nyowani Zvekuita Matambudziko eiyo 50th Anniversary yeRedwood National Park
Zvinonetsa zvezviitiko inzira dzinounzwa neApple mu Apple Watch kutitangisa kuti tifambe zvakanyanya uye pamusoro pezvese kuti tifambe zvirinani, aya ndiwo maratidziro akangwara kubva kukambani yeCupertino anova mubatsiri wakanaka kune hutano hwedu uye hupenyu hwezuva nezuva.
Chirangaridzo che50th cheRedwood National Park muUnited States of America chiri kuswedera uye kambani yeCupertino inoipemberera nematambudziko matsva. Tiri kuzoona kuti izvi zvibudiriro zvitsva zvinosanganisirei izvo zvatinogona kuwedzera patafura medari yedu kana tikazvizadzisa mutsamba.
Sezvatakataura, zviri kubva zuva rinotevera September 1 Kana chiitiko chikaitwa, nekuda kweizvi isu tinofanirwa kupedzisa chero rudzi rwekurovedza kwemaminitsi makumi mashanu kungave kufamba, kumhanya kana muwiricheya:
Musi waGunyana 1, tinopemberera Zuva reNational Parks pasi rese, mubairo wakafemerwa nemakumi mashanu emakore eRedwood National Park. Ita kufamba, kumhanya, kana wiricheya kurovedza muviri chikamu chingangoita makumi mashanu maminetsi kuti usvike ipapo. Rangarira kuti iwe unofanirwa kushandisa iyo Chitima application kuti ukwanise kuivhura.
Mubairo uyu unongowanikwa chete musi iwoyo, saka unofanirwa kuziva zuva rekutanga raGunyana kana uchida kuwana mukana wekuzviita. Semazuva ese, isu tichava nemenduru, pakiti yezvinamirwa yakafuridzirwa nepaki yekushandisa kweMessage uye menduru inoenderana. Vhiki gare gare izvo zvimiti zvitsva zveChiitiko cheMessage chikumbiro chichauya icho chatinogona kuzviratidza isu neveko veboka rekudzidzisa. Iko hakuna ruzivo rwechokwadi pamusoro pazvo, asi zvese zvinoratidza kuti kubudirira uku kunogona kuwanikwa chete muUnited States of America, kunyangwe Apple yaita "yepasi rose" kutaura nezvayo, haungarasikirwe nechinhu nekuyedza, handiti? Zvakare, mune ino nguva yezhizha hauzokuvadze zvishoma kurovedza muviri.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » dzakawanda » Nyowani Zvekuita Matambudziko eiyo 50th Anniversary yeRedwood National Park
IKEA kuvhura HomeKit-inoenderana plug in kugogodza-pasi mutengo
Iyo iPhone 7 SE inosimudza musoro wayo kuchengetedza diki skrini